शी जीनपींगको भारत भ्रमण किन महत्वपूर्ण? - BBC News नेपाली
शी जीनपींगको भारत भ्रमण किन महत्वपूर्ण?
हर्ष भी पन्त प्राध्यापक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, किंग्स कलेज, लण्डन
Image caption चिनीयां राष्ट्रपति शी जीनपींगले गुजरातबाट आफ्नो भारत भ्रमणको आरम्भ गर्दैछन्
भारतको कुटनीतिक डायरीमा यो चाखलाग्दो महिना हुन पुगेको छ।
अघिल्लो महिना जापानको सफल भ्रमण पछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुधबार चीनका राष्ट्रपति शी जीनपींगलाई आफ्नो देशमा स्वागत गरेका छन्।
यसपछि उनी सेप्टेम्बर महिनाको अन्त्यतिर संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा जानेछन्।
राष्ट्रपति शीको भारत भ्रमण र प्रधानमन्त्री मोदीको अमेरिका भ्रमण दुवै नै उल्लेखनीय रुपले महत्वपूर्ण हुने ठानिएको छ।
भारत-चीन सम्बन्धको तनावपूर्ण ताजा विगतको सन्दर्भ चिनीयां राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणलाई निकटताका साथ नियाल्ने र विश्लेषण गर्ने काम भैरहेको छ।
गुजरातको मुख्य मन्त्री छंदा नरेन्द्र मोदीले पांच पटक चीनको भ्रमण गरेका थिए। उनले अरु कुनै देशको यति धेरै पटक भ्रमण गरेका थिएनन्।
र उनी चीनको आर्थिक प्रगतिबाट देखिने गरि नै प्रभावित भएका छन्।
गत मे मा उनको अभूतपूर्व निर्वाचन विजयलाई बेइजींगमा राम्रो समयको संकेतका रुपमा लिनेहरु पनि छन्। तिनीहरु प्रधानमन्त्री मोदीलाई भारत- चीन सम्बन्धलाई नयां उचाईमा पुर्याउने भारतका “निक्सन” का रुपमा प्रशांसा गर्दैछन्।
त्यस्तो प्रारम्भीक उत्साहजनक प्रतिक्रिया अहिले केहि मत्थर देखिएको छ तर बेइजींगले प्रधानमन्त्री मोदीलाई नतिजा दिन सक्ने बलियो नेताका रुपमा लिने गर्छ।
त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री मोदीसंग सम्बन्ध विस्तार गर्न चीनले देखाएको हतारोलाई, अमेरिकाले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक पुनर्सन्तुलनको तयारी गर्दै गर्दा विस्तारित भारत-प्रशान्त क्षेत्रमा देखिंदै गरेको चीनविरोधी गठबन्धनतर्फ दिल्लीलाई आकर्षित हुन नदिन आवश्यक कदमका रुपमा पनि व्याख्या गरिंदैछ।
चीनका राष्ट्रपति शीले आफ्नो भारत भ्रमणको शुरुआत नरेन्द्र मोदीको ६४ औं जन्म दिनको दिन बुधबार उनकै गृह राज्य गुजरातबाट गर्दै छन्।
उनलाई त्यहां भारतका प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत रुपमा स्वागत गरेका छन् र उनलाई साबरमती नदीको किनारमा परम्परागत परिकारहरु सहित रात्री भोज दिइंदैछ।
प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति शी बीच यसअघि ब्राजीलमा भएको ब्रिक्स शिखर बैठकका बेला भेटघाट भैसकेको छ र त्यसबेला यि दुई नेताले कायम गरेका राम्रो व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रयोग यो भ्रमणलाई सफल तुल्याउनमा हुनेछ।
नरेन्द्र मोदी जस्तै नै शी जीनपींग पनि एकजना बलियो राष्ट्रवादी नेताका रुपमा चिनीन्छन्। राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दामा उनी पनि कट्टर विचार राख्छन् तर आर्थिक मुद्दाहरुमा सहयोग गर्न निकै उत्सुक पनि छन्।
कुटनीतिक कौशल देखाउनका लागि पनि आफ्ना पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह भन्दा नरेन्द्र मादीसंग बढी अवसरहरु छन्। मनमोहन सिंह आफ्नो राजनीतिक आधिकारिकताको सिमीतता र उनको पार्टीको विदेशनीतिमा देखिएको कमजोरीका कारण सांघुरिएका थिए।
कांग्रेस पार्टी चीनको संवेदनशीलतामाथि आघात पुग्न जाने हो की भन्ने आशंकाहरु ग्रस्त देखिन्थ्यो र परिणामत: जापान र अमेरिका जस्ता साझेदारहरुसंगको सम्बन्ध संकटमा पर्न गए। तर नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरे लगत्तै तुलनात्मक रुपमा बढी आत्मविश्वासी धारणा व्यक्त गरेका छन्।
त्यस क्रममा उनले खुला रुपमा चीनको “विस्तारवाद” को चर्चा गरेका छन् भने चीनको तीब्र गतिको सैन्य आधुनिकीकरणको नकारात्मक प्रभावबाट भारतलाई जोगाउन ठोस कदमहरु पनि चाल्न थालेका छन्।
संगसंगै उनले भारतमा चिनीयां लगानी भित्र्याउन सम्भव भएसम्मको सबै प्रयास गर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्।
चीनको कर्पोरेट क्षेत्रले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतप्रति नयां चासोका साथ हेर्न शुरु गर्दै गर्दा चीनले कतिपय ठूला लगानी योजनाहरुको घोषणा गर्ने अनुमान गरिएको छ।
भारतले विशिष्ट औद्योगीक क्षेत्रहरुको स्थापना गरेर चिनीयां कम्पनीहरुलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्नेछ।
चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो ब्यापारिक साझेदार हो तर झण्डै चालिस अर्ब डलरको हाराहारीमा उस्ले ब्यापार घाटा बेहोर्दै आइरहेको छ।
र यो स्थितीमा सुधार ल्याउन पनि प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो ध्यान लगाउने छन्।
भारत-चीन सम्बन्धका सामु विभिन्न चुनौतीहरु छन् – कटुतापूर्ण सीमा विवाद देखि लिएर बढ्दो ब्यापार असन्तुलनसम्म।
विगत केहि बर्ष देखि भारत र चीनबीच आपसी ‌अविश्वास बढीरहंदा सार्वजनिक धारणहरु पनि नकारात्मक बन्दै गएका छन्।
भारतीय गृह मन्त्रालयका अनुसार यो बर्षको २१६ दिनमा चिनीयां सैनिकहरुले ३३४ पटक भारतीय सीमामा अतिक्रमण गरेका छन्।
हिन्द महासागरमा चीनको बढ्दो सैनिक उपस्थितीले भारतलाई अर्कै चुनौति थपीदिएको छ।
यी दुई देशहरुबीच चुनौतीहरु ठूला छन् तर बेइजींग र दिल्लीमा उदाएको बलियो नेतृत्वका कारण प्राप्त अवसरहरु पनि ठूलै छन्।
नरेन्द्र मोदी र शी जीनपींग दुवैले यो अवस्थालाई बुझेका छन्। अब यो ज्ञानलाई ब्यवहारमा उतार्न दुवै कति सफल हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिं यो हप्ताले देखाउने छ।